ဒီခေတ်က လက်ကိုင်ဖုန်းခေတ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ လူအယောက်တိုင်းလိုလိုမှာ လက်ကိုင်ဖုန်းကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေက အရင်ခေတ်ကာလများကကဲ့သို့မဟုတ်သောပဲ ပိုပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိလာတဲ့အပြင် အိမ်တွင်ရှိသော စားပွဲတင်ကွန်ပြူတာကဲ့သို့ပင် စွမ်းဆောင်လာနိုင်လာပါတယ်။ အရင်က လက်ကိုင်ဖုန်းများကို ခေါ်ယူဆက်သွယ်မှု၊ စာတိုပေးပို့မှုနဲ့ ပြက္ခဒိန် နှိုးစက်အစရှိသော အော်ကနိုက်ဇာပရိုဂရမ်ငယ်အသုံးပြုမှု အတွက်သာသုံးဆောင်ခဲ့ကြသော်လည်း၊ ယနေ့ခေတ်တွင် ခေါ်ယူဆက်သွယ်မှု စာတိုပေးပို့မှုများသာမက အီးမေးလ်ပို့ဆောင်မှု၊ လမ်းပြမြေပုံအသုံးပြုမှု၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာဖတ်ရှမှု၊ ရေဒီယိုနှင့် သီချင်းဖိုင်နားဆင်မှု၊ ရုပ်သံဖိုင်ကြည့်မှု၊ ဂိမ်းကစားမှု၊ လူမှုရေးအင်တာနက်ဆိုဒ်များအသုံးပြုမှု အစရှိသဖြင့် နေ့တာဓူဝ လူမှုဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာမှန်သမျှ အမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အသုံးပြုလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုပ္မဏီကြီးများကလဲ (ဥပမာ Nokia) သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းအသုံးပြူသူများအတွက် အမျိုးမျိုးသော ၀န်ဆောင်မှုများပေးတဲ့အပြင် အသုံးပြုသူစိတ်ကြိုက် ပရိုဂရမ်များတီထွင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာလက်ကိုင်ဖုန်း software platforms အလိုက် OS, SDK, APIs အစရှိသော software development kits များကို အင်တာနက်ပေါ်တွင်ထားရှိခြင်းအားဖြင့် ၄င်းတို့ကိုအလိုရှိသော အသုံးပြုသူ ပရိုဂရမ်မာများ ဒဗလုပ်ပါများအား အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။လက်ကိုင်ဖုန်းသုံးပြုသူများထဲတွင် မိမိလိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီအောင် ကိုယ်ပိုင်ပရိုဂရမ်ရေးသားသူများ ရှိသလို မိမိ၏ါသနာအရကိုယ်ပိုင်ပရိုဂရမ်ရေးသားချင်သူများလဲရှိပါတယ်။ တချို့ကတော့ ကိုယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့ပရောဂျက်ဖြစ်သမို့ မဖြစ်မနေ အပရီကေးရှင်းများ ဒပလုပ်လုပ်ရသူများလဲရှိပါတယ်။ အကယ်လို့ ဝါသနာအလျှောက် သို့မဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်လိုအပ်ချက်အတွက် ကိုယ့်လက်ကိုင်ဖုန်းအတွက် အပရီကေးရှင်းလေးရေးချင်တယ်၊ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းက Nokia ကုမ္ပဏီထုတ်ဖြစ်ပြီး အဲဒီဖုန်းရဲ့ OS က Symbian ဖြစ်ပြီး S60 platform ဆိုရင်တော့ SDK ကို ဒီအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ သွားရောက်ရယူနိုင်ပါတယ်။ Nokia Forum ကနေ download ရယူလျှင် ဖိုရမ်မှာ Register account တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီ Symbian Platform မှာ အပရီကေးရှင်းတွေကို C++, Java တို့နဲ့ develop လုပ်နိုင်သလို ခင်ဗျားရဲ့ favorite language ဖြစ်တဲ့ Python နဲ့လဲ လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Python ပရိုဂရမ်မာများအတွက် PyS60 ရှိပါတယ်။ Python Quick Start စာမျက်နှာနဲ့ PyS60 download ရယူဖို့အတွက်စာမျက်နှာပါ။ စိတ်ဝင်စားပါက Nokia E-Learning စာမျက်နှာမှာ Symbian S60 အကြောင်းနဲ့ Python for S60 eLearning basic တွေကိုရှာယူလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာလေ့လာဖို့ကောင်းတဲ့အခြားအရာများကိုလဲ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ Nokia လက်ကိုင်ဖုန်းက ဘယ် platform မှာလဲမသိရင် ဒီ devices စာမျက်နှာမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။S60 3rd Edition SDK emulator on my PC.PyS60 Application Packager for My Python ApplicationsInstall python runtime and python shell to Nokia E71-1ဒီလေးတွေ setup လုပ်ပြီးတာနဲ့ ပိုင်သွန်ပရိုဂရမ်ငယ်လေးတွေ ကျနော့်လက်ကိုင်ဖုန်းအတွက် ရေးလို့ရပါပြီး။ ကိုယ်ပိုင်ပရိုဂရမ်လေးတွေရေးသားပြီး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။Enjoy! Have fun!!
Upgrade to ubuntu 10.4 LTS Beta
ကျနော် ဒီညနေပျင်းနေတာနဲ့ ubuntu.com ကို၀င်ကြည့်လိုက်တယ်၊ download ubuntu 10.4 beta 1 ကိုတွေ့တာတယ်။ ပျင်းနေတာနဲ့အတော်ပဲဆိုပြီး ရှိနေတဲ့ ubuntu 9.10 ကနေ ubuntu 10.4 LTS beta ကို upgrade လုပ်လိုက်တယ်။ ubuntu 10.4 က အရင် release တွေထက်သိသိသာသာပိုမြန်လာတယ်။နောက်ပြီး Yahoo! search engine က Firefox မှာ default engine အနေနဲ့ပါလာတယ်။ Yahoo! search engine လဲတော်တော်လေးလန်းပါတယ်။"Yahoo! search engine"နောက်ပြီး GNOME panel ကိုလဲ တော်တော်လေးလန်းတယ်။ ကီးဘုတ် အင်ဒီကေတာကလဲ panel ထဲမှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးပါ။"Keyboard Indicator in Panel"ကျန်တဲ့ new features တွေလဲ အများကြီးပါနေမှာပါ။Enjoy!
To my blog readers..
ဇော်ဂျီဖွန့်သုံးရာကနေ မြန်မာ၃ ကို စပြောင်းသုံးရာမှာ အခက်အခဲလေးတွေရင်ဆိုင်ရတယ်။ သူများဇော်ဂျီနဲ့ရေးထားတာကို မမြင်ရတဲ့ပြဿနာ၊ လင်းနက်မှာ မြန်မာ၃ ရိုက်မကြွမ်းသေးတဲ့ပြဿနာ၊ ဇော်ဂျီဖွန့်နဲ့ မြန်မာ၃ အတူတကွထားလို့မဖြစ်တဲ့ပြဿနာ၊ ထားလို့ရပြန်သော်လည်း ဇော်ဂျီဖွန့်ကိုလုံးဝ မမြင်တော့တဲ့ပြဿနာတွေပါ။လက်တလောဖြေရှင်းနိုင်တာတွေက++++++++++++++++++++၁) မြန်မာ၃လက်ကွက်မကျွမ်းတာက ကိစ္စမဟုတ်လောက်တော့ပါ (ရေးပါများရင်)၂) မြန်မာ၃ နဲ့ ဇော်ဂျီ နှစ်ခုတူတူထားချင်ရင်လဲ .fonts.conf လေးရေးထားပြီး $HOME dir အောက်မှာထားရုံပါ။ (ညီသူရ ကျေးဇူး)၃) သူများရေးထားတဲ့ဇော်ဂျီဖွန့်ကိုကြည့်ဖို့ရာလဲ Zawgyi to Unicode 5.1 UserScript လေးရှိပြီးသားပါ။ ( ကိုစိုးမင်း ကျေးဇူး)၄) ကျနော်ရေးထားတာ မမြင်ဘူးဆိုလဲ ကိုစေတန်ရဲ့ Unicode 5.1 to Zawgyi Userscript ကိုအသုံပြုပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ (ကိုစေတန် ကျေးဇူး)၅) Facebook friends တွေနဲ့လဲ English conversation နဲ့ communicate လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။လောလောဆယ် testing ကာလမှာ မြန်မာ၃ နဲ့ Ubuntu မှာ အိုကေနေပါတယ်။
Test writting in mm3
ကျနော်မြန်မာ၃ကို ကောင်းကောင်းမသုံးဖူးပါဘူး။ သွင်းကြည့်တာလောက်နဲ့ပဲရပ်ရပ်သွားခဲ့တယ်။ခု ကျနော်ရိုက်တာ မြန်မာ၃ နဲ့ပါ။ လက်ကွက်ကအကျင့်မရသေးတော့နည်းနည်းလေးနေတယ်။အလေ့အကျင့်လုပ်ပေးရအုံးမယ်။
Burma-keyboard-Tk package new release v0.1.1 မှာ burma-keyboard-nogui ကိုလဲထည့်လိုက်ပါတယ်။ အချို့က GUI နဲ့ လန်းလန်းဆန်းဆန်း သုံးချင်ကြသလို အချို့မှာ Tcl\_Tk package ကို install လုပ်ဖို့ရာအခက်အခဲရှိကြမှာပါ။ တခါတလေ အရမ်းလောနေတဲ့အခါမျိုးမှာ တခါတည်းပဲ install လုပ်လိုက်ချင်သူများအတွက် အဆင်ပြေအောင် -nogui ကိုပါထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုဖို့ရာ အရင်အတိုင်းပဲ package extract လုပ်ပြီး source folder ထဲဝင်တဲ့အထိအတူတူပါပဲ။ ဥပမာ ကိုယ် download လုပ်ထားတဲ့ package က Desktop ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုရင် ..$ cd ~/Desktop$ tar xzf burma-keyboard-tk-0.1.1.tar.gz$ cd burma-keyboard-tkGUI နဲ့ run သူများအတွက်တော့ $ sudo python burma-keyboard-tk.pyGUI မပါပဲ command line နဲ့အသုံးပြုများအတွက်ကတော့$ sudo python burma-keyboard-nogui.pyပြီးရင်လိုချင်တဲ့ font ရွေး၊ y ကိုနှိပ်။ပြီးရင် install လုပ်ချင်ရင် i ကိုနှိပ်ပေး။ remove လုပ်ချင်ရင် r ကိုနှိပ်ပေးပါ။အောက်မှာ screenshots လေးတွေကိုပါ။"Extract and Run""Chooseafont and confirm""Installing"ဒီ screenshots ထဲကအရာတွေအားလုံးဟာ zawgyi-keyboard packages အသုံးပြုသူများနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ GUI နဲ့ CLI ကိုလိုအပ်သလိုသုံးနိုင်ကြပါတယ်။မကြာမီ PyGTK နဲ့ ထွက်လာတဲ့အခါ အားလုံး တပြေးညီ GUI နဲ့ သုံးနိုင်ကြသလို CLI နဲ့အသုံးပြုချင်သေးသူများအတွက်လဲ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။Download: burma-keyboard-tk-0.1.1.tar.gzMore info: READMEEnjoy playing with it!